Wasiir ku xigeenka Batroolka oo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus ku boorriyay in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir ku xigeenka Batroolka oo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus ku boorriyay in...
Wasiir ku xigeenka Batroolka oo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus ku boorriyay in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska Dalka
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Magaalada Columbus, Ohio Dalka maraykanka ayaa si diirran usoo dhoweysay Wasiir ku xigeenka Wasaarada Macdanta iyo Batroolka Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane; Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal.
Wasiirka oo Safar shaqo ku tagay Dalka Maraykanka ayaa uga warbixiyay Jaalidda Soomaaliyeed xaaladda uu Wadanku marayo, wuxuuna ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dib-udhis ka Dalka si hormar waara loo gaaro.
Mudane: Hilaal, ayaa mid-mid u gacan qaaday,kanaa xog waraystay xubnahii ka qeyb galay kulanka xaaladda Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqaan dalka Maraykanka, wuxuna ku boorriyay in ay isgarab taagaan Dowladdooda iyaguna ay muujiyaan walaalnimo iyo Waddaniyadda ka dhexaysa bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleQatar oo mashaariic ka hirgelineysa maamul goboleedka Hirshabeelle
Next articleGuddiga dib u heshisiinta Galmudug oo gaaray Gaalkacyo